Dowaldda Federaalka ah oo markii u horeysey si toos ah u faragashatey wakhtiga doorashada ee Puntland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dowaldda Federaalka ah oo markii u horeysey si toos ah u faragashatey wakhtiga doorashada ee Puntland
Dowaldda Federaalka ah oo markii u horeysey si toos ah u faragashatey wakhtiga doorashada ee Puntland
October 21, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaarada arimaha gudaha dowlada federaalka Soomaaliya ayaa markale looga hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowlada federaalka.
Warsaxaafadeedka oo ka koobnaa afar qodob ayaa lagu sheegay in shirkii 8-September uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo uu weli sidiisii yahay isla markaana gogashii uu dhigay madaxweynaha ay ka baaqsadeen madaxda maamul goboleedyada.
Sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowlada federaalka ay weli diyaar u tahay in ay dhageysato wixii cabasho iyo tabashooyin ah ee ay soo gudbiyaan madaxda dowlad goboleedyada wixii khilaaf ah ee jirana la xaliyo.
War saxaafadeedka ayaa loogu digey Dowald goboleedyada kala ah Puntland iyo Koonfur galbeed mid walbana loo sheegay in aysan sinaba uga dib dhigi karin maalinta doorashada ee ay iyagu mudeysteen.
Wasiirka Arrimaha gudaha ee Dowaldda federaalka Cabdi maxamed Sabriye ayaa ah nin aan inta badan la arag isla markaana saxaafadda wax war ah siin. Warka ka soo baxay Wasaaradda laguma saxiixin magaca Wasiirka.